I-Moorea - Isitudiyo esinamachibi okubhukuda
Pihaena, Paopao, Moorea, i-French Polynesia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Emilie
Itholakala phakathi kwe-Cook ne-Opunohu Bays, 20mn ukusuka esikhumulweni semikhumbi, 5mn ukuya ezindaweni zemakethe ngemoto, nendwangu (2km) kuya ogwini oluhle lomphakathi olunesihlabathi esimhlophe. I-bungalow inomoya opholile, inendawo yokugezela kanye nekhishi, ehlangana nekhaya lomndeni endaweni ethule yokuhlala enikeza ukufinyelela echibini (100min).
- I-Air Conditioned
- Isiqandisi, indawo yokupheka
4.97(129 okushiwo abanye)
Indawo yokuhlala, ibanga elifushane ukusuka e-Hilton Moorea Hotel kanye nolwandle oluhle lwesihlabathi esimhlophe saseMareto. Ithule futhi ivikelekile. Isitolo esikhulu sitholakala ezansi kweCook Bay, 5 mins drive. Izindawo zokudlela ze-Hotel Hilton (2min) noma i-Maharepa (10min) zizokwamukela nakanjani. Uma uthanda i-snorkeling, ingadi enkulu yamakhorali onayo iphambene nje, amamitha ayi-100 ukusuka ku-bungalow.
Njengoba sizinze isikhathi eside e-Moorea Island, sizokwazisa abahambi mayelana nemisebenzi, ukuhamba izintaba, nezindawo ezingcono kakhulu ongazivakashela, futhi sizixhumanise nabahlinzeki besevisi bendawo.
Inombolo yepholisi: 416DTO-MT
Hlola ezinye izinketho ezise- Pihaena, Paopao namaphethelo